Shiinaha 92 alumina alumina dahaarka dhoobada dhoobada ee xoqida iyo daxalka warshad xalka u adkeysata iyo alaab-qeybiyeyaasha | YUNFENG
92 alumina dhoobada dahaarka dhoobada ah ee xoqida iyo xalka u adkeysiga u nuglaanta
Xidho tuubada dhoobada u adkaysta Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay metallurgy, macdanta, korontada, dhuxusha, petrochemical iyo warshadaha kale, gaaska adag, dareeraha nidaamka dareeraha adag, gaar ahaan waxyeelada halista ah wuxuu ku dhacaa xusulka, saddex xiriiriye. Caabbinta xirashada aadka u wanaagsan Waxay korsataa alumina ceramics sida safka, inta uu nool yahay dhuumaha ayaa ka sarreeya 10 jeer birta adag ee caadiga ah. U adkaysiga daxalka Alumina dhoobada waxay leedahay faa iidooyinka nabaad-guurka biyaha badda, aashitada iyo caabbinta alkali, sidoo kale ilaalinta baaxadda Khilaaf pr ...
Xidho tuubada dhoobada u adkaysta
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay metallurgy, macdanta, korontada, dhuxusha, petrochemical iyo warshadaha kale, gaaska adag, dareeraha dareeraha adag, gaar ahaan waxyeelada halista ah wuxuu ku dhacaa xusulka, seddex xiriiriye.
Caabbinta xirashada wanaagsan
Qaadashada alumina dhoobada sida safka, inta uu nool yahay dhuumaha ayaa ka sarreeya 10 jeer birta adag ee caadiga ah.
Iska caabinta daxalka
Alumina dhoobada waxay leedahay faa'iidooyin nabaad-guurka biyaha badda, aashitada iyo caabbinta alkaliska, sidoo kale ilaalinta baaxadda.
Gudaha gudaha oo siman oo aan nabaad-guurin, jilicsanaanta gudaha ee tuubooyinku way ka sarreeyaan tuubooyinka kale ee birta ah.
Tuubbada isku dhafan waxay noqon kartaa waqti dheer oo hoos maraya heerkulka -50-800 ℃.
heerkulka sare dhoobada
Waxaa loo isticmaali karaa sida kubbadda qaadista, rullaluistemadka, kursiga kubbadda, qalabaynta, aaladaha cusub ee goynta dhoobada, bamka bistoolada, qalabka wax lagu xiro ee mashiinnada mashiinka;
Waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro saddex jeer saxanka waalka hawada iyo preheater tuubada gudaha ee warshadaha sibidhka ,;
Waxaa loo isticmaali karaa sida xirashada iyo daxalka u adkaysta waxyaabaha, sida waalka kubada, jirka bamka, carburetor guban iyo filter ee warshadaha kiimikada.
Waxaa loo samayn karaa wax soo saarka birta ah ee caaryada iyo u dhinta samaynta, sida koritaanka, mandrel, extrusion, caaryada siligga diil, duudduuban, gudbinta rullaluistemadka, kululaynta qalabka jirka, tuubbada tuubbada kuleylka ah ee kuleylka leh, taageerada kuleylka kuleylka biraha, dhaldhalaalka, tuubada aluminium ee dareeraha ah , aluminium xariiqda dahaarka r ee warshadaha qalliinka.
Waxaa loo isticmaali karaa gawaarida gaashaaman, caloosha diyaaradaha, dharka aan rasaasta cadeyn karin, qalabka qiiqa gantaalka iyo shaqada kale ee heerkulka sare ee warshadaha aerospace;
Hore: Xiro oo saameyn u adkeysato 92 alumina dhoobada dhoobada dhoobada dhoobada / taper tubada ee dhuumaha xamuulka qaada
Xiga: Gogosha Xakamaynta Gogosha
92% 95% Xidho Alumina Cajaladda Tuuboyinka Tuuboyinka Xaraashka ee Soo-saaraha Dahaarka
Alumina dhoobada Dhuxul dhoobada Alumina For Wear Resistance
Manuacturer dhoobada safka dhoobada dhogorta leh iska caabin Wear sare
Xidho Xadgudubka U Adkeysiga Alumina Dhibbanaha Dhuxul-birta Birta ah